Caawimaad raadso haddii aad jiran tahay - USAHello
Macluumaadka koronafayras > Caawimaad raadso haddii aad jiran tahayWaxaa tarjumay Translators without Borders
Dhamaanteen wuxuu kacabsanayaa waxa dhici kara hadii uu xanuunsado. Laakin waad helaysay waxii kaalmo ah hadii aad xanuunsato. Kasii diyaar garow adiga iyo qowskaagaba hadiiba ay dhacdo inuu midkamida ah uu xanuunsado
Waa maxay calaamadaha xanuunkan lagu garto?
Calaamadaha xanuunkan ayaa ah calaamada lagu garto inaad xanuunsantahay. laakin taa macnaheedu maahan qofwalboo xanuunka COVID-19 uu haleelo wuu isku arkayaa calaamadaha xanuunka oo dhan. Dadka badankoodu haduu xanuunku kudhaco way kacaafimaadayaan ayagoonba ubaahan wax daryeel caafimaad ah. Dadyar maba lagu arkayo wax calaamadihii xanuunka ah. Dadka qaar ayay uga muuqanaysaa waliba si’aad ah caalamadaha xanuunka.
Calaamadaha ugu waawayn ee caabuqa COVID-19 waa:
Neefta oo ku qabata
Badi dadka uu xanuunkan caabuqa COVID-19 waxay dareemaan daal aad ufarabadan. Calaamadaha kalee lagu garto waa: cuncun iyo jirxanuun, sanka oo xirma duufna yeesha (sida qofka markuu qabow ku dhaco) cunaha oo xirma, shuban iyo dhadhanka oo qofka kaluma.
Astaamaha aan la arki karin
MUHIIM: Xitaa calaamadahaagu yihiin kuwo sahlan, weydii in lagaa hubiyo heerarka ogsijiintaada. Dad badan oo qaba COVID-19 ayaa leh heerar oksijiin oo hooseysa mana oga. Heerarka oksijiinta oo aad u hooseeya ayaa aad khatar u ah. Laakiin haddii heerarka ogsijiintaada si dhakhso leh loo daaweeyo, si dhakhso badan ayaad u bogsan kartaa.
Maxaan sameeyaa haddii aan xanuunsado?
Haddii xanuunkaagu uusan aad udarnayn
Badi dadka u xanuunsanaya caabuqa COVID-19 waxay dareemaan xanuun aan saa udarnayn waxayna kabiskoodan ayagoo guriga iska jooga. Waxaa haboon inaad wacdo dhakhtarkaaga ama xafiiska qaabilsan caafimaadka saad uhasho talooyinka caafimaadka. Waxay kuwaydiin doonaan su’aalo iyagaana kuu sheegaya waxa’aad samaynsayso. Booqo boga internetka CDC si booqo xarunta caafimaad ee istaytkaaga gobolkaaga.
Seed u daryeelayeelaysaa naftaada adigoo guriga joogo
Halkan waxaan kuugu soo bandhigaynaa talooyinka ay bixiyaan CDC xarunta xakamaynta cuduruda ee ah sidii aad isu daryeeli lahayd adigoo gurigaaga jooga:
Gurigaaga joog, markii aad shaqada katimaado, ama iskuulka, hana aadin meelahaa ay dadwanahu ay isugu yimaadaan.
Lasoco calaamadaha xanuunka lanaxiriir xarumaha bixiya adeega caafimaadka hadii uu xaalkaagu kasii daro.
Nasasho badan qaado biyo badana cab.
Hadii aad horay ulahayd balan dhanka caafimaadka ah, isku day inaad taleefon iska sii hormariso kuna sheegayso in lagayaabo caabuqa COVID-19 inuu kugu dhacay.
Dabool afkaaga markaad qufacayso loves aad hindhisayso.
Gacmahaaga had iyo jeer ku maydh saabuun iyo biyo
Isku day inaad isku baxnaaniso qol gaar ka’ah qoyska intooda kalen si ay iyagana xanuunka aad u qaadsiinin.
Kafogow inaad la wadaagto dadka kale ee aad isku qoysk aad tihiin waxa aad khaaska uleedahay sida, sida weelashada cuntada, shukumaanada qabayska, iyo sariirta jiifka,
Marwalba kudadaal inaad nadiifiso meela marwalb badanaa lataaban karo, sida miska lacag qabashada, miisaska guriga, handaraabka albaabka.
Dhamaan talooyinka waxaa ku heli kartaa luqadaha Carabi, Shiinays, Ingriis, Kuuriyaan, Isbaanish, iyo Fiyatnaamiis.
Hadii aad adiga ama caruurta aad xanuunsataan kaasoo aan lamid ahayn COVID-19, ula tacaal sidii hore ee caadiga ahayd eed isaga daawaynjirtay. Hadaadan hubin waxii aad qaban lahayd, iskuday inaad wacdo xarunta dadwaynaha ee caafimaadka intaadan aadin dhaktarka loves xarunta caafimaadka.
Hadii aad uxanuunsatahy
Hadii uu qofku ay xumadiisu ay aad ukacsantahay, ama uu neefsigu uu dhibayo, markaa waa inuu sida ugu dhakhsaha badan uu u helaa gargaar caafimaad. Hadii midibka wajigooda loves bishimahooda ay isbadalaan ayna yeeshaan midab buluug ah qofkaas waa inuu helaa gargaar caafimaad oo dag dag ah, Hadii ay walbahaaraan loves badanaa hurdaan, markaa isku day inaad caawimaad hesho dhanka caafimaadka ah. Waxaad wacdaa intaadan aadin lanbarkan 911 loves dhakhtarkaaga loves lanbarka gargaarka dagdag ah ee isbitaalka. Kuna dadaal inaad usheegto markaad taleefonka aad diriayso in lagayaabo xanuunka COVID-19 inuu kuhayo. Waxay kuwaydiin doonaan su’aalo iyagaana kuu sheegaya waxa’aad samaynsayso.
Qofka xanuunsan oo meelgooni lagu daweeyo, karantiil
Qofka oo meelgooni lagu hayo waxay kadhigantahay qofka xanuunsan oo laga fogeeyo dadka kale si uusan uqaadsiin xanuunka. Waad isku karantiili kartaa guriga sidoo kale waxaad heli kartaa in lagugu baxnaaniyo qaybta karantiilka ee isbitaalka. Hadii aad kujirto isbitaalka qaybta karantiilka lama ogala dadkale inay kusoo booqdaan.
Karantiilka macnihiisu waa qofka laga yaabo inuu xanuunsanyahy oo jooga meel gooni ah oo kafog meelaha dadka kale intii muda ah. Waxaa laga yaabaa in qofka xanuunsaday inuu adigu yahay loves mid kamid ah qowskaada. dhanka COVID-19, xiliga qofka la’ogaanayo ee karantiilka waa 2 isbuuc.
Hadii aad iska dareento xanuun loves meel xanuunka jeermisku uu kajiro aad la falgashay markaa isku day inaad wacdo rugta caafimaadka. Iyagaa kuu sheegaya inaad ubaahntahay in aad iskarantiisho iyo inkale.
Hadii aad joogto isbitaalka
Iskuday inaad hesho magaca dhakhtarkaaga hadii aad ubaahato inaad lahadasho.
Usheeg shaqaalaha isbitaalka waxii run ah sida haday jireen xanuuno hore, waxii dawo eed qaadato, iyo dhamaan waxii caafimaadkaaga wax u dhibayo. Dhakhaatiirta hadaad runta iyo waxa jira u sheegto markaa waxaa suura gal ah in ay sifiican ay kuu caawiyaan.
Haday jiraan wax aadan fahansanayn waxaad isku daydaa inaad waydiisato cadayn dheeraad ah saad u hesho warbixin dheeraad ah.
Waxaad xaq u leedahay inaad codsato isbitaalku inuu kuu keeno tarjumaan. Hadii aan laheli karin tarjumaan isfahan xaga luqda ahna ay jirto waxaad shaqaalaha waydiiisataa inay istiticmaalaan Google Translate loves Tarjimly lagana heleya taleefoonadooda.
Hadii shaqaalaha caafimaadku ay yihiin kuwa aad u mashquulsanyahy aadna kawrbahaarsantahay inay xaalku xumaado laxiriir xafiiska xafiiska udoodo bukaansocodka. Xafiiskan waa mid dadka udooda una hadla.
Waydiiso isbitaalka inuu siiyo xubnaha qoyskaaga iyo qofka aad uqortay in ay laxiriiraan hadba waxii soo kardha ee akhbaar dhankaaga ah hadii adiga aadan lahadli karin.
Ma’ubaahantahay wax caawimaad ah dhanka wada xiriirka waayo waxaa tahay qof curyaan ah. Aqri oo soo dajiso warbixintan kusaabsan xaquuqdaada iyo in aad isbitaal hesho warbixintaasoo kuqoran Ingiriis iyo Isbaanish.
Malayga baaraya caabuqa coronavirus?
Waad heli kartaa baaritaan si aad u ogaato in aad qabto iyo inkale caabuqa COVID -19. Qof kashaqeeya caafimaadka ayaa sankaaga galinya qoriyar suufna leh si lagaaqaado dheecaanka baaritaanka lagu sameenyo. Dheecaankii lagaa qaaday waxaa loo qaadayaa shaybaarka. Haduu ay baaritaanku noqdo mid togan taa macneheedu waa waxaa qabtaa caabuqa COVID-19. Hadii ay noqoto mid tabana macnaheedu waa maqabtid wax caabuqaCOVD-19.
CDC Xarunta kahortaga cudurada looma baahno in qofwalba laga baaro caabuqa COVID-19. Laakiin baaritaanku waxaa kaa caawinyaa waxaad samaynlahayd si aad naftaada aad u daryeesho dadka kalana aad u badbaadiso Hadii aad isku aragto wax calaamado ah aadna rabso inaad isbaarto waxaad wacaysaa qaybta caafimaadka ama dhakhtarka, Booqo boga internetka CDC si booqo xarunta caafimaad ee istaytkaaga gobolkaaga.
See wax la’iigu qaban karaa wax waraaqo oo sharci ah hadaan haysan?
waxaad heli kartaa adeega caafimaadka hadii aadan wax shrci ah haysan laakiin waan marka wacdaa xarunta caafimaadka, Hadii ay jiraan wax calaamado ah waxaad wacdaa qaybta caafimaadka dadwaynaha intaadan utagin dhakhtarka xarunta caafimaadka. Xarunta caafimaadka iyo isbitaalada caawiya dadka qoxootiga ah iyo dadka masaakiinta maraykanka ah lagama rabo inay soo gudbiyaan waraaqaha sharciga ah ee dhalashadooda, qofka bukaanka ahana waxaa ilaalinaya qawaaninta maraykanka eka. Waxaad kaheli kartaa macluumaad intaa kasii dheer ee kusaabsan qoxootiga, iyo qofka magangaliyo doonka ah, qoxootiga xilayada ayjiraan xaaladaha dagdaga ah.
Kawaran haddii aan heysanin caymis caafimaadka?
inta Badan bulshooyinka gudaha Mareykanka, waxaad heli kartaa rug caafimad oo u adeegta bukaanada dakhliga-hooseeya iyo kuwaan ceymiska laheyn. Adiga ayaa raadin kara xarun caafimaad bilaash ah oo aad awooodi karto kuuna dhow.
Macluumaadkan wuxuu kayimid illo lagu kalsoonyahay, sida Xarumaha Xakamaynta Cudurrada iyo Ururka Caafimaadka Adduunka. USAHello mabixiso talo sharci ah ama latalin caafimaad, mana jiraan wax waxyaabeheenna kamid ah oo loogu talagalay in loo qaato talo sharci ahaan mid caafimaad. Macluumaadkayaga caafimaad waxaa dib u eegay xubin ka tirsan guddiga USAHello Tej Mishra, Xirfadle caafimaad oo dawladeed oo Mareykan ah iyo aqoonyahan cudurada-faafa.
Ma qabtaa su’aalo badan oo ku saabsan wax yalaha kula habon inaad sameeyo haddii aad xanuunsato Waxaad weydiin kartaa [email protected].